Kupona Mars: Green Planet Kuuya muQ2 Mwaka Uno | Linux Vakapindwa muropa
Paradox yazivisa Kupukunyuka Mars: Green Planet, kuwedzera kutsva kweiyo Surviving Mars vhidhiyo mutambo watakataura nezvayo muLxA pakutanga uye zvakare inoshanda neLinux. Iko kuwedzera kutsva kuchauya gore rino muQ2, ndiko kuti, mukota yechipiri yegore. Kune avo vasingazive mazwi aya anowanzo shandiswa zvakanyanya muindasitiri, yechipiri kota kana Q2 inguva inotangira muna Kubvumbi, Chivabvu naJune.
Mukuwedzera uku pachave ne terraforming kumeso kwepasi Mars, uye inobvumira vatambi kuti vaite zvinhu zvitsva mune iri zita rakakura Iyo simulator yakanga yatove yakanaka kubva pakutanga, asi neiyi nyowani yekuwedzera ichave yakatove nani. Vagadziri vacho vari kushanda nesimba kuti vatange iyi nyowani yekuwedzera, sekusimbisa Haemimont Games CEO Gabriel Dobrev.
Iye CEO iye amene akati «Terraforming ndiyo yakanyanya kukumbirwa munharaunda medu kubvira Kupona Mars kwakatangwa gore rapfuura, uye tinofara kupedzisira tagovana nayo neGreen Planet kuwedzera«. Naizvozvo, ndezve shanduko inozivikanwa pakati pevateveri vemusoro uyu vaitarisira. Asi izvo hazvisi izvo chete shanduko kana ruzivo rwekuwedzera.
Kunze kweiyo terraforming Mars, iyo ichaita kuti nyika tsvuku ive neruvengo uye isiri nzvimbo inogarwa nevanhu iyo ichaita kuti iwe uve neunyanzvi hwekuchengetedza koloni yako pamberi pemamiriro matsva emuchadenga, tembiricha, mvura, zvinomera, nezvimwe. Kune rimwe divi, kuchave nenhau maererano nehuswa hunogona kuve nahwo, senge miriwo mitsva, miti, nezvimwewo, kuti vakwanise kushandura iyo nyika tsvuku ive yerimwe girini nekuda kwemaitiro matsva e agriculture.
Tichavawo nazvo matambudziko matsva nemapurojekiti izvo isu tichafanirwa kuita, sekunyungudusa matanda, kutora iyo asteroid chando, kuvhura nzvimbo magirazi, nezvimwe, zvese kugadzirisa mamiriro ehupenyu nekuita kuti nyuchi irarame. Kuchavewo nezvivakwa zvitsva zvinomwe zvatinogona kuvaka, uye mamiriro ekunze achange akaomarara kuti zvisakuitira nyore.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » chiutsi » Kupona Mars: Green Planet iri kuuya muQ2 gore rino
Maitiro ekubvisa mapeji kubva paPDF kubva kuLinux PC yako